Mareykanka oo taageeray Warmurtiyeedkii Midowga Afrika ee Somaliya | Dhacdo
Mareykanka oo taageeray Warmurtiyeedkii Midowga Afrika ee Somaliya
Mareykanka ayaa taageeray tallaabada Golaha Nabadda & Amniga ee Midowga Afrika u uku cambaareeyay muddo kordhinta Hay’adaha Dowladda Federaalka.
“Waxaan taageersanahay go’aanka Golaha Nabadda & Amniga ee Midowga Afrika ee lagu cambaareynayo muddo kordhinta uu toddobaadkii hore meelmariyay Baarlamaanka Somaliya.” Ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta Xafiiska Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Afrika.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Mareykanka soo dhaweynayo doorka uu Midowga Afrika ugu kala dab-qaadayo Danleyda Siyaasadda ee Somaliya, iyadoona Madaxda Dowladda Federaalka loogu baaqay inay ogolaadaan waddo si degdeg ahi loogu xalin karo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka.
“Waxaan soo dhaweyneynaa dhexdhexaadinta Midowga Afrika, waxaana ku boorineynaa Madaxda Somaliya inay ogolaadaan waddo horey loogu socdo, oo si dhakhso ah loogu xalinayo xiisadda doorashada.” Ayaa lagu sheegay qoraalka.
Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa xalay soo saaray Warmurtiyeed lagu laayay muddada labada sano ee loogu daray muddo xileedka Hay’adaha Dowladda Federaalka, waxaana Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowladda Goboleedyada loogu baaqay inay u hoggaansamaan heshiiskii 17-kii September, ee qeexayay nooca doorasho ee dalka.